Une femme fantastique - Le FILM
Oscars 2018: présence historique d'artistes transgenres dans les films nommés
L'actrice Daniela Vega interprète Marina dans "Une femme fantastique" de Sebastian Lelio. © Fabula / Collection Christophel
Ireo fanontaniana mipetraka matetika miaraka amin'ny valiny
Marefo tokoa ve isika MSM eo anatrehan'ny VIH sy ny Sida?
ENY Tena marefo tokoa isika MSM eo anatrehan'ny tsimok'aretina VIH. Ny mamparefo antsika MSM amin'ny IST sy VIH dia tsy nohon'ny maha MSM antsika, fa noho ny fanaovana firaisana ara-nofo tsy voaaro sy ireo fomba mahazatra hafa fanaontsika tsy am-piheverana. Marefo ihany koa isika satria betsaka ny mbola tsy mahafantatra ny fitondran-tena ara-pananahana mendrika eo amintsika MSM.
Amin'ny fomba ahoana no mety hahazoantsika MSM ny IST sy VIH?
Ny aretina sy ny tsimok'aretina VIH izay azo avy amin'ny firaisana ara-nofo dia mifindra amin'ny alalan'ny tsiranoka amin'ny vatan'olombelona, na ny rà, na ny tsirin'aina. Noho izany, mety ho voa isika raha ohatra ka:
Manao firaisana tsy voaaro amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy
Mitsindrona zava-mahadomelina ka mifampizara fitaovana tsy voadio
Mifampizara fanjaitra tsy voadio na efa niasa tamin'ny fanaovana tombo-kavatsa (tatouage), tevika
Manao firaisana ara-nofo tsy voaaro amin'ny izay mifampizara tsindrona sy mampiasa fitaovana tsy voadio
Ahiana foana ve ny firaisana ara-nofo eo amin'ny samy MSM?
TSIA, tsy voatery, indrindra raha mitandrina ireto manaraka ireto isika:
Mifampiresaka tsara amin'ny olona miaraka aminao ianao amin'ny fiarovana tokony hosafidinareo
Manoroka sy manafosafo ny faritra ivelan'ny taova-pananahana
Manao firaisana amin'ny olona iray izay efa nitily ary voamarina fa tsy mitondra tsimok'aretina (ary ianao irery ihany no olona miaraka aminy)
Azo atao ve ny mampihena ny risika mety hifindran'ny aretina mandritra ny firaisana ara-nofo?
Mihena ny risika hifindran'ny aretina rehefa:
Tsy minono na koa mangarona lava-body na fivaviana indrindra raha misy fery ny tànana na ny vava mandritra ny firaisana
Tsy minono filahiana indrindra raha misy vay, vontsy, tsiranoka tsy mahazatra sy misy fofona mivaoka
Tsy milelaka lava-body sy tsy manatsofoka Tanana any anaty lava-body raha tsy misy fiarovana
Tsy manatsofoka ny ratsan-tanana manontolo any anaty lava-body (fisting) izay mety handrovitra ny temotry ny ativody sy ny atifivaviana.
Tsy manao firaisana amin-kerisetra indrindra raha misy ny fandehanan'ny rà
Tsy mifanakalo fitaovana fanaovana firaisana ara-nofo tsy voadio (toy ny bibity plastika sns...)
Inona ary ireo fitrandremana hafa tokony hatao?
Ireo fitandremana hafa tokony hatao:
Mampiasà kapaoty foana isaky ny firaisana ara-nofo
Fadio ny mifampizara tsindrona na fitaovana maranitra rehefa mandray zava-mahadomelina
Fanjaitra vaovao foana no ampiasaina isan'olona rehefa mitevika sy manao tombo-kavatsa
Tokony hahena ny isan'ny olona iarahana sy hanaovana firaisana ara-nofo na inona na inona ny anton'ny fiarahana
Fadio ny mandray zava-mahadomelina (rongony na taoka) mialoha ny hanao firaisana ara-nofo
Fadio ny mifampizara fitaovana fanaovana firaisana ara-nofo tsy voadio
Manatona mpitsabo raha misy tsimetimety eo amin'ny fitaovam-pananahana na koa misy ahianao ny firaisana nataonao farany.
Inona no ilàntsika MSM manao fitiliana?
Ilaina ny manao fitiliana IST/VIH satria:
Tsy hitatsika ety ivelany na mitondra na tsy mitondra tsimok'aretina ny olona iarahantsika, eny fa na dia tomady sy tsara tarehy (beau gosse) aza izy.
Betsaka amintsika MSM no manao firaisana ara-nofo tsy voaaro amin'ny olona samihafa
Ny manao fitiliana rà ihany no hany fomba tokana ahafantarana fa tsy mitondra tsimok'aretina VIH ny olona iray
Hilamin-tsaina sy hitandrina kokoa isika rehefa mahafantatra ny "statut" antsika.
Aiza avy ireo toeram-pitsaboana mandray an-tànana antsika MSM?
Ho antsika eto Madagasikara, manatona ary ny toeram-pitsaboana izay vonona sy voahofana ny handray an-tànana manokana antsika MSM.